दुरी टाढा भएर कस्ले भेट्न छाड्यो किशोरलाई ? - www.dthreeonline.com
दुरी टाढा भएर कस्ले भेट्न छाड्यो किशोरलाई ?
प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर १५, २०७५ समय: १८:३२:२१
काठमाडौं/ सामाजीक प्रेमकथामा निर्माण गरिएको फिल्म ‘डोली’ मा समाबेश दुरी टाढा भएर पो बोलको गीत शनिबार सार्वजनीक गरिएको छ । राजबहादुर सानेको लेखन र निर्देशनमा बनेको ‘डोली’ २८ मंसिरमा प्रदर्शन हुदैछ ।सार्वजनीक दुरी टाढा स्याड सङ हो । राज सरगमको स्वर र शब्द रहेको गीतमा बाबुल गिरीको संगीत छ । हेर्नुस् भिडियो ।
गीतमा फिल्ममा सबै प्रमुख कलाकारको अभिनय समेटिएको छ । रेड बर्ड प्रोडक्शनको ब्यानरमा किरण नेपालीको प्रस्तुति ‘डोली’ मा पृथ्वीराज प्रसाईं, किशोर खतिवडा, सानीया खान, संगीता नापीत, अर्जुन गुरुङ, नवीन रेग्मी, प्रशान्त भण्डारी, दामोदर खतिवडा, प्रिया रिजाल, हिउंवाला गौतम,सतिश खत्रीलगायतका कलाकारले अभिनय गरेका छन् ।